Fanadihadiana mora amin'ny sehatra mailaka | Martech Zone
Alakamisy, Aprily 14, 2011 Sabotsy, Oktobra 29, 2011 Douglas Karr
Mahita orinasa maro mitolona amin'ny fanadihadiana amin'ny mailaka aho. Ny mpamatsy mailaka sasany dia nanandrana nampiditra takelaka ho ao anaty apetrak'izy ireo, mba hahalalany fa ny ankamaroan'ny mpanjifa mailaka (an-tserasera sy na tsia) dia tsy hanome ny fanadihadiana mailaka araka ny tokony ho izy. Mampalahelo fa matetika no noforonina ny mailaka rehefa mifanaraka amin'ny fahaizan'ny mpanjifa mailaka ratsy indrindra.
Koa satria manolotra tsindry eo amin'ny rohy ireo mpanjifan'ny mailaka, ny fomba tsotra indrindra hakana ny fanadihadiana na fanadihadiana amin'ny alàlan'ny mailaka dia ny fampidirana rohy misaraka ho an'ny valiny tsirairay. Vao nahazo mailaka Netflix aho izay manao izany:
Mahafinaritra sy tsotra. Tsy ilaina ny fidirana (tafiditra ao anaty rohy ny identifier ary nampitaina tamin'ny pejy itodiana izay manisa ny fanadihadiana), tsy manindry rohy iray ary avy eo manokatra endrika hafa, tsy misy data miditra…. tsindrio fotsiny. Tsindrio mahery izany! Tsy azoko antoka hoe maninona ny mpivarotra (sy mpanome tolotra mailaka maro kokoa) no tsy mampiasa an'io fomba fiasa io!
Lahatsary: ​​Compendium: BCC ny bilaoginao?